अभियुक्तलाई हिरासतबाट छुटाउने शिक्षामन्त्रीलाई कारबाही गर्न पूर्वमन्त्रीको माग | Diyopost
काठमाडौं, ९ असार । जातिय विभेद तथा छुवाछुतको कसुरकी अभियुक्त घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गर्न पुग्ने शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मिन विश्वकर्माले श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
‘पीडितलाई न्याय दिन जाहेरी दिइ मुद्दा बोक्नु पर्ने सरकारका मन्त्री घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियानै पूरा गर्न नदिइ स–शरीर आफै प्रहरी कार्यालय पुगेर अभियुक्तलाई छुटाई मन्त्रीकै सरकारी गाडिमा राखेर लैजान्छन भने यो भन्दा लज्जास्पद र पागल्पन के हुन सक्छ ? अब कानुनी राज्य र बिधिको शासन सकिएकै हो,?’ प्रश्न गर्दै उनले लेखेका छन्,‘अख्तियार दुरुपयोग भनेको घुस खानु मात्रै होइन पदिय हैसियतको दुरुपयोग पनि हो ! त्यस्ता मन्त्रीलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याइयोस् ।’
केहीदिन अघि बबरमहलमा कोठा भाडामा दिने कबुल गरेपछि घरबेटी सरस्वति प्रधानले जातको कारण देखाउँदै भाडामा दिन अस्विकार गरेकी थिइन् । पीडित बनेकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले महानगरीय प्रहरी बृत सिंहदरबारमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
जाहेरी पछि पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वति प्रधानलाई सरकारी वकिल समक्ष पेश नै नगरि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको दबावमा आज छुटाइएको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफै प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए । शिक्षामन्त्रीकै गाडीमा चढेर चढेर उनी छुटेकी थिइन् ।